Tuuboyinka Tooska ah
Ku soo dhowow dalabka!
Fasaxii ka dib, waxaan ku soo laabannay si caadi ah shaqada. Ku soo dhowow dalabka, waanu ku diyaarin doonaa iyaga waqtiga. By habka, waxyaabaha our ugu weyn yihiin gariiradda galvanized, go'yaal preinted, tuubooyin bir ah iyo taarikada la rogay qabow.
Ciid Wanaagsan Guga saaxiib kasta!
Waxaan jeclaan lahaa qof kasta oo akhriya maqaalkan inuu yahay Sannad Cusub oo Shiine ah iyo Dhammaan wanaag sannadka soo socda. Waxaan jeclaan lahaa inaan la yeesho xiriir wadashaqeyn qof kasta oo u baahan gariiradda galvanized, gariiradda la sii diyaariyay iyo tuubooyin bir ah. Nasiib wacan sanadka cusub!
Saamaynta cudurka faafa ee loo yaqaan 'cowid-19', rarka ma ahan mid waqtigiisa ku dhaca
Saamaynta cudurka faafa ee loo yaqaan 'cowid-19', qaar ka mid ah alaabta ceeriin ayaa ku yar. Cudurka faafa awgood ee ka jira Xingtai, Gobolka Hebei, qaar kamid ah alaabta ceyriinkeena lama qaadi karo, marka rarka ma ahan mid waqtigiisa ku dhaca, fadlan fahan. Waxaan aaminsanahay in dadaalka wadajirka ah ee dhammaantiin, aan ca ...
Toddobaadle: Tilmaamaha birta ee mashiinnada birta Shiinaha ayaa kordhay 6.3%
Laga bilaabo Jannaayo 13, shanta kayd ee birta, siligga siligga, gariiradda kulul, rooga qabow iyo saxanka ku jira warshadaha birta ee la daraaseeyay waxay dhan yihiin 5.8 milyan oo tan, kororka 6.3% marka la barbar dhigo usbuucii hore. Rikoorka usbuucii hore wuxuu ahaa 3.2%. Waxaa saameeyay kororka kiisaska COVID-19 ee Heb ...
Salaamaha xilliyada Liaocheng Derunying Badeecadaha iyo Qalabka Co.ltd
Iyada oo 2021 ay xaq u leedahay koonaha kooxdeena waxay jeclaan lahayd inaan kaaga mahadcelino taageeradaada joogtada ah inta lagu gudajiray sanadka 2020. Waxaan kuu rajeynayaa adiga, qoyskaaga iyo saaxiibbadaa ciid wanaagsan oo Kirismas ah iyo Sannad Cusub oo aad u Farxad badan U fiirso inaan kula soo xiriiro Sannadka Cusub, Salaan wanaagsan！
Xawaare qoto dheer oo bir duuban ah oo duuban, oo loo adeegsaday alaabada dhaldhalaalka ah - Hankeena
Sawir qoto dheer oo bir bir duuban ah oo qabow ah, waa hankeenna, waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhaariyo dhaldhalaalka, sida kuwa soo socda; Aslo, fadlan u hel faahfaahinta sida soo socota (iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha):
Tuubooyin alwaax alwaax-in Manila-Welcome macaamiisha kale macaamiisha nala soo xiriir！
Waxaan hadda heshiis la saxiixannay macaamiisha Manila. Waxaan soo dhawaynaynaa macaamiisha ajaanibta ah inay nala soo xiriiraan.
Go'yaal galvanized ah oo ka socda Liaocheng Derunying oo loo dhoofiyo Vietnam
Si loo fuliyo baahida ugu weyn ee macmiilka, dhammaan howlahayaga waxaa si adag loogu fuliyaa iyada oo la raacayo halheyskeenna "Tayada Sare, Qiimaha Iibsiga Cadaadiska, Adeegga Degdegga ah" ee qiimaha jaban Shiinaha Zinc Dahaarka 40-180g / Galvanized Sheet, Shirkaddayadu waxay u heellan tahay bixinta c ...
Calcium Silicate Board-U-dhoofin CAT LAI, HCM, VIETNAM
LIAOCHENG DERUNYING ALOOD AND MATERIALS CO., LTD way idin barakeynaysaa dhammaantiin: Farxad Dhexdhexaad Dayrta. Waad nala soo xiriiri kartaa xitaa fasaxa haddii aad xiiseyneyso alaabtayada. Email: xiejing_861208@126.com & dry@derunying.com WeChat: 18865285296
Alaabooyinka loo dhammeeyay sidii loogu talagalay
Macaamiil caan ah oo loo habeeyay Soosaarida Saxanka Qaboojiyaha oo ah alaab ceeriin ah oo lagu sameeyo taarikada dhoobada Waxaan ku dhamaysanay hawshii sidii loogu talagalay oo hadda waxaan sugeynaa rar.
Waxyaabaha Saameeya Xoogga Daalka ee Waxyaabaha Tubaakada Birta ah ee birta ah
Awoodda daalka ee walxaha tuubbada birta ah ee birta ah ee Shandong Derunying ayaa aad ugu nugul arrimo kala duwan oo dibedda iyo gudaha ah, taas oo arrimaha dibedda ka mid ah ay yihiin qaab, cabir, dusha sare ee dusha sare, iyo xaalad adeeg ama wax la mid ah qaybaha, arrimaha gudahana ka mid ah halabuurka, .. .
Cinwaanka: QOLKA 301, GURIGA XAFIISKA WEIRUN LIJIE, NO.30, HUANGHE ROAD, LIAOCHENG HIGH-TECH WARSAMADA HORUMARINTA SHANGDONG